२०७४ माघ २८ आइतबार १२:१५:००
“उचाल भाइ हो......! बल गर भाइ हो.....”
तीन घडी रात बाँकी छँदै गाउँपाखामा सुनिने ग्राम्य लवज थियो, कुनैबेला यो ।
चार गाउँ उल्टिएर नोलको सहायताले घट्टको डुँड बोक्दा, खोला किनारका घट्टका भालेपोथी उचाल्दा बोलिने समवेत भाका हो यो । तर, यो लोककथाजस्तो भइसक्यो ।
यायावरीका लागि देशदेशावर जाने क्रमसँगै गाउँका खोलामा न कुलाको छङछङ..संगीत सुन्न पाइन्छ, न कतै घट्टको नाद नै गुञ्जन्छ । न पुल्ठो, च्वाँके बालेर रातविरात घट्ट जाने छन्, न त घट्टमै रोदी बस्ने र ठाडो भाका गाउनेहरू भेटिन्छन् ।
गाउँपाखाहरू रित्तो र शून्य भित्तो बन्दै जाँदा घट्टमा पिँधेको मौलिक स्वादहरू क्रमशः लोप हुँदैछन् । जीवन र संस्कृति बनेको घट्ट भग्न र अवशेषमा रूपान्तरण हुँदैछ । आधुनिकताले आदिम सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यलाई कसरी पाखा लगाउँछ भन्ने उदाहरणसमेत हो घट्ट । ‘कुन घरले कस्तो खान्छ, घटेरोलाई थाहा हुन्छ’ ग्राम्य–आहान थियो कुनै बेला । तर, ढिकी, ओखल, जाँतोसँगै लोप हुने पछिल्लो कोटीमा परेको छ घट्ट ।
गाउँले लय र जिउँदो संस्कृतिको पर्याय बनेको घट्टलाई नाटकका माध्यमबाट भए पनि जोगाउन लागि परेका छन्, पुरू लम्साल ।
घट्ट घुमाएर जीवन चलाएका दीन–हीन घटेरा, घट्वारेहरूको जिजीविषा, जिगीषा । धुस्रफुस्रे हुँदै घट्टमा पीठो पिँधेर पेटमा तातो लगाइरहेका सवाल्टर्न, किनाराकृतहरूलाई रङ्गमञ्चमा सादृष्य उतार्दैछन् ।
‘नेपालमा नाटकै लेख्ने छैनन् । नेपालमा मञ्चनीय कथा, कहानी छैन’ भनेर आफ्ना मझेरीका कथा छाडेर विदेशका आँगन, रछ्यान चहार्नेहरूको भीडमा भेटिँदैनन् उनी । कुना–कन्दरामा विलुप्त अवस्थामा रहेका सुक्ष्मातिसुक्ष्म विषयलाई टपक्क टिपेर घट्टझैँ कुँद्ने र बान्किलो तुल्याउने विशिष्ट छवी छ उनमा । र, दशकदेखि रङ्गसाधनामा एकचित्त छन् ।
गाउँमा जन्मिए पुरू । भीरपाखाको सुसेली । खहरे खोल्सा । रातभरि सुसाउने नदी उनका जीवनका धुन र लय बने ।
नुवाकोट, हल्दे कालिका, बेलडाँडा हो उनको थातथलो । विषमताको पर्याय । घरबाट स्कुल आउनै डेढ घन्टा पैदल हिँड्नुपर्थ्यो । बीचमा खारे खोला थियो । त्यहाँ अनगिन्ती घट्टहरू थिए । निःसहाय, निमुखाहरूको रोजीरोटीको माध्यम थियो त्यो । ज्यालाको पीठो खाएर जीवन उकास्थे, त्यहाँ घट्वारेहरू ।
घट्वारेहरूको जीवनशैली अनौठो थियो । भोकै–अनिदै, रातदिनै घट्टमा बस्थे । पीठो पिन्थे । हप्ता–दश दिनमा पीठाको धोक्रो बाँधेर घर फर्कन्थे । त्यही देखेर हुर्किए पुरू ।
कयौँ रात उनले पनि घट्टमै व्यतीत गरेका छन् । स्कुल जाँदाआउँदा त्यही घट्वारेले ढुंगामा सेकाएको रोटी खाएर उनले भोक रित्याएका छन् । भनौँ न, घट्ट नै उनको जीवन भोगाइको अपूर्व पाठशाला हो ।
बडहरे भन्ने ठाउँमा जोरघट्ट (एउटै कुलाबाट चल्ने दुईवटा घट्ट) थियो । त्यहाँका घटेरा निकै प्रिय थिए । बाटामा कोही केटाकेटी देखे भने पनि तिनले मकै र गहुँको पीठो मिसाएर पकाएको रोटी खान दिन्थेँ ।
“म त त्यही मुट्के रोटी पो खाएर हुर्किएको हुँ त ?,” बाल्य–सम्झनाको दहमा डुबुल्की मार्छन् उनी । अनुहारमा अतीतद्योतक भाव छाउँछ ।
‘यही घट्टमा बस्न पाए, घट्वारेले पकाएको रोटी खान पाए. अहा..’ मुड्के रोटीले कयौँपटक उनको जीवनलाई आस्वादित तुल्याएको छ र बाल्यकालको टिठलाग्दो कहर बिर्साइदिएको छ । “घट्टमा बस्नु अनौठो रहर थियो, तिनताका,” केटौले उमेरको कुइनेटामा पुगे उनी । ओठमा अतृप्त आभा छायो ।
घर नजिकै चोकते खोला थियो । चोकते जीवनको निर्मिमेष सुसाइ थियो । सिँचाइमात्र होइन, त्यही खोलाको पानीबाट चल्ने घट्टको पीठो खाएर दश गाउँले जीवन निर्वाह गर्थ्यो।
दिनभरि घरको काम गर्‍यो, रात ढल्किएपछि भारी बोकेर खोला झर्थे पुरूहरू । राति पालो पनि पाइने, घट्ट जाने बहानामा घरको काममा बाधा पनि नपर्ने । त्यही भएर उनीहरू रातको समयमा घट्ट–पीठो गर्थे उनीहरू, सायद ।
राति घट्ट त गयो तर समय कसरी बिताउने ? सुत्यो भने घट्टको ओइरो सकिएर घोटिएला भन्ने भय । खेतमा पानी लगाउने मौसममा त कुलो भाँचेर घट्टै नघुम्ने बनाइदिन्थे । र त, आगो बालेर भररात जाग्राम बस्थे उनीहरू । “आगो बालेर बस्नू, मध्य रातमा त खोलामा भूत, प्रेत, पिचास आउँछ,” बाबुआमाले यसो भनेको सुन्दा मुटु भयले कुँजो बन्थ्यो ।
त्यसो त उनको पुर्खा पनि ‘घट्वारे’ हो । उनका हजुरबाले कुनै बेला घट्ट अधियाँमा कमाउन दिएका थिए । ‘दोभाने खेत’ छेउमा थापिएको घट्टको ज्यालामा आएको पीठो खाएर हुर्किएका हुन् पिता–पूर्खा भन्दा हुन्छ ।
पछि उनका हजुरबाले डिजेलबाट चल्ने टुकटुके मिल भित्र्याए । अहिले पनि उनका काकाको विद्युतबाट चल्ने चामल कुटानीपिसानी छ ।
ती मिलले विगतको ‘घटेरो’को पृष्ठभूमिलाई धूमिल बनाइदियो ।
गत वर्ष मञ्जरी नाट्य समूहको आमन्त्रणमा उनी लमजुङ पुगेका थिए । मञ्जरी नाट्य समूहले सञ्चालन गरेको तीनदिने नाट्य कार्यशालाका लागि निम्त्याइएका थिए उनी ।
कार्यशालामा फरकफरक पृष्ठभूमिका मानिसहरू आएका थिए । कार्यशाला सकिएपछि उनीहरूले पुरूलाई बेँसीसहरबाट २२ किलोमिटरमाथि दोर्दी खोला लगे । पछिल्लो समय दोर्दीमा थुप्रै जलविद्युत् परियोजना बन्दैछन् ।
एकजना वयोवृद्धले सुनाए, “कुनै समय दोर्दीमा फट्के नहुँदा धेरैले ज्यान गुमाए । कति अंगभंग भए । अहिले खोलैभरि विजुली बाल्ने कम्पनी खुले ।”
उनको मनमा कूतुहलता सघन भयो । उनले बूढाको माध्यमबाट विस्मृतिको गर्तमा पुगिसकेको दोर्दीका कथा उधिने ।
कुरा खोस्रँदै जाँदा ती वयोवृद्ध कुनै समयका घटेरो रहेछन् । दोर्दीको घट्टले उनको गृहस्थी धानेको रहेछ । दोर्दीका घट्टमा तिनताक ठाडो भाका गाइन्थ्यो र पीठो पिन्न आउनेहरू नाचगान गरेरै रात बिताउँथे । पश्चिममा त घट्ट गायन–संस्कृतिको अद्वितीय केन्द्र पो रहेछ ।
यीनै कुरा मथिङ्गलमा घट्टको मदानीसरह घुम्न थालेपछि ‘पानीघट्ट’ पूर्णाङ्की नाटकले जन्म लिएको हो । र, तिनै वृद्धले दोर्दीको फड्केको किस्सा सुनाएपछि पुरूले ‘पानीघट्ट’सँगै ‘फड्के’ पूर्णाङ्की शृङ्खला तयार पारेका हुन् । खोला तर्ने फड्केसेमत नभएर धेरैको जीवनको भागदौड टुंगिएको दोर्दी वियोगको प्रतीकसमेत रहेछ ! वृद्धको मुखबाट विदारक कहानी सुनेपछि ‘फड्के’ पूर्णाङ्की तयार नपारुञ्जेल निद्रा नै परेन उनलाई ।
“स्कुल पढ्दा कहिलेकाहीँ तादीमा फड्के हाल्न जान्थ्यौैँ, त्यसैले पनि फड्केलाई नाटकीय रूपान्तरण गर्न कठिन भएन,” उनले रचना–भ्रूणका केही आयाम पस्किए ।
मञ्जरी नाट्य समूहकै तत्वावधानमा गत वर्ष नै उनले ‘फड्के’ मञ्चन गरेका थिए । ‘फड्के’ मञ्चनकै क्रममा उनलाई खट्कियो– “‘पानीघट्ट’लाई कसरी बिट मार्ने ?”
यसवर्ष पनि मञ्जरीले भन्यो, “पुरूजी यस वर्ष पनि नाटक मञ्चन गरौँ । तर कथाचाहिँ पोहोर तपाईंले सुनाउनुभएको ‘पानीघट्ट उपयुक्त हुन्छ ।”
उनले त्यसअघि नै ‘पानीघट्ट’सँग जोडिएका सम्भावित कथाक्रमहरू खोजेका थिए । त्यहीबीचमा ठाडो भाका–पुरुष स्व. भेडीखर्के साइँला, दीर्घराज अधिकारीसँग पनि दुई पटक भेट गरेर ठाडो भाकाको सांस्कृतिक आयाम बुझेका थिए ।
‘पानीघट्ट’लाई मियो बनाउने र समाजका अन्य संगती, विसंगतीलाई पनि सहायक कथा बनाउन निधो गरे ।
“हरेक घरका मानिस वैदेशिक रोजगारीमा छन् । परिवारले बजारबाट महिनैपिच्छे चामल किनेर लैजान्छ । तर, घरसँगै जोडिएको बारी बाँझै छ । घट्ट विस्थापित हुने सहायक कारण यो पनि हो,” नाटकमा उनले यही कुरा देखाउन खोजेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीले गाउँ पुरूषविहीन बनाएको छ । हुर्किएका पुरुषले धमाधम गाउँ छाड्न थालेपछि महिलाहरू शव बोकेर दाहसंस्कार गर्न जान अभिशप्त छन् । ढुंगा कुँद्ने, डुँड बनाउने, कुलो फर्काएर घट्ट थाप्ने मानिस नै कहाँ पाइन्छन् र ? यसले पनि ‘पानीघट्टको’ नाटकीय खण्ड पूरा गर्न सघायो उनलाई ।
देश जसरी विप्रेषण उन्मुख बन्दैछ, समाज त्यसैगरी विकृति उन्मुख बन्दैछ भन्ने तथ्य नाटकमार्फत पटाक्षेप भएको छ भन्छन् उनी ।
नाटकसँग उनको उठबस बालापनदेखि नै भयो । गाउँका पानासोनिकको लाइसेन्सवाला रेडियो थियो । पञ्चायतकालमा सरकारसँग अनुमति लिएर मात्रै रेडियो बजाउन पाइन्थ्यो । त्यही रेडियोमा बज्ने बाल कार्यक्रम र रेडियो नाटक सुनेर हुर्किएका हुन् पुरू ।
त्यसका अतिरिक्त घरमा श्रीमद्भागवत, दुर्गा सप्तशती, रामायण, कृष्णचरित्र आदि पुस्तकका ठेलीहरू पनि थिए । हजुरबुबा, बुबा, काका श्लोकादि ग्रन्थहरू सस्वर वाचन गर्थे ।
एउटा किस्सा सुनाए उनले । तिनताका ठूलो बुबा नन्दराम लम्साल नेपालगञ्ज बस्थे र उनी गद्यमा चिठी लेखेर पठाउँथे । हजुरबुबाले पनि छन्दमै जवाफ फर्काउँथे ।
वयोवृद्ध । लेख्नसमेत खासै नजान्ने हुनाले हजुरबुबाको जवाफ उनै पुरू लेखिदिन्थे “पत्तै नपाई लयमा कविता लेख्न पो अभ्यस्त भएँछु,” हाँस्न थाले उनी ।
रेडियोमा वाचन हुने समाचारको नक्कल गर्थे । “प्रवीण गिरीको समाचार त दिनहुँ नक्कल गरेर सुनाउँथे । बासुदेव मुनाल पनि उत्तिकै मन पर्नुहुन्थ्यो,” पुलकित हुँदै सुनाउँछन् उनी ।
बाल्यकालमै गाउँका केही अग्रज–अनुज मिलेर ‘जालीको जाल सोझाको काल’ मञ्चन गरे । यसैगरी रङ्गमञ्चको यात्रा आरम्भ भयो उनको ।
०५५–०५६ सालमा काठमाडौँ आएपछि उनले केही रेडियो नाटक गरे, जीतेन्द्रमहत अभिलाषीसँग मिलेर । “तिम्रो सबैकुरा राम्रो छ । अभिनय सिकेर आफूलाई तिखार,” अभिनयमा पारङ्गत हुन अभिलाषीले नै प्रेरणा दिएका हुन् उनलाई ।
त्यसपछि उनी वीरेन्द्र हमालको सङ्गतमा पुगे र नाटक सिके । सांस्कृतिक संस्थानले गरेका थुप्रै नाटकमा उनले अभिनय कला पस्किए ।
नाटक सिक्दै गएपछि उनलाई खट्किन थाल्यो– हामीले गरेका नाटकहरूमा हामी आफैँको जीवन, संस्कृति आएको छ कि छैन । नुवाकोटको विषमता छिचोलेको पुरू लम्सालले आफ्ना कथा मञ्चमा प्रस्तुत गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यायावरीका लागि खोलामा घट्ट थाप्ने र रूखोपीठो खाएर जीविका चलाउने घट्वारेहरूको सिमान्त कथा नाटकमा आएकी आएनन् होला ?
“यिनै प्रश्नले एकपछि अर्को गरी पिरोल्न थालेपछि जन्मिएको हो– ‘पानीघट्ट’,” यति भनेर कुराकानी टुंग्याए उनले ।